Ụbọchị My Pet » Olee Ihe Ị Maara Ị na Ịhụnanya?
emelitere ikpeazụ: Sep. 23 2020 | 3 min agụ
M na-echeta oge mbụ m Isaac. M na-eche eziokwu eleghị anya bụ na ị maara na ọ dị gị n'obi ozugbo. Ị maara ihe dị iche n'etiti ndị niile azọpịa ma na ike mmetụta na i nwere maka ndị na otú ị na-eche banyere nke a otu onye. Na-asị na, otú ị maara Juda ala ole na ole ihe nke m na e depụtara n'okpuru ebe.
Mgbe ị hụrụ n'anya na onye ị na-gị kasị ngwangwa. Ị chọrọ ime ihe dị ha, mmasị ha, -eme ka ha nwee obi ụtọ. -Ekwu na ha efunahụ ha obere akpa ihe atụ na ị bụ onye mbụ na-achọ ya. Ma ọ bụghị otú ahụ na nke 'Oh, na onye ogbenye funahụrụ ha obere akpa.’ Ọ bụ ihe karịrị na. Ị na-apụghị ịmị ọ bụla ihe ọjọọ na-eme ha. Ha bụ oke mma nke a onye maka ihe ọ bụla ihe ọjọọ na-eme ha. Ha adịghị kwesịrị ihe ọ bụla ihe ọjọọ na-eme ha. Ha meghere gị mmetụta na i chere na ị dịghị adị ma ọ bụ ihe magburu onwe ya karịa gị pụrụ ichetụwo n'echiche. Ị malite na-n'ime music ha na-amasị. I maghi, ọ nwere nnọọ ike ịbụ mmalite nke a mkparịta ụka. Ma ọ bụrụ na ọ bụ unrequited, otú ọ ga-abụ. The ọṅụ ị ga-esi site n'ụzọ ị na-eche banyere ha akpaghasị ihe ọ bụla nke na-ewute (ma ọ bụ nso ara!) na ị na-enwe mmetụta, n'ihi na ị nwere ike ghara inwe ha. Ya mere ihu ọma kemgbe ngwangwa ma furu ihe niile banyere ihe ha bụ ma eleghị anya isi ụzọ ị ga maara ma na-amara na ị ga-enye gị niile na nrọ na-na ha. M na-eche na nke ahụ bụ eleghị anya otú m maara n'ihi na m nnọọ oké ọchịchọ na ihe ikpeazụ m chọrọ bụ ka a ga-kegide ala-eto eto ma ọ bụrụ na ọ ga-amasị chọrọ m azụ na ọ chọrọ dajụọ m maara na oge m ga-ya nke m maara na m na-agaghị eme ihe ọ bụla nwoke.
Ekwu okwu banyere Ha mgbe nile
Nke a bụ ihe siri ike onye n'ihi na ị na-eme nke a banyere ndị mmadụ na i nwere azọpịa na kwa ma ọ bụ ihe na-akpata kemgbe ke ịhụnanya kwa. Ọ bụ naanị na ọ bụ na mgbakwunye na ihe ndị ọzọ a na ndepụta mgbe ị na ịhụnanya dị ka megide e ịhụnanya nzuzu. Echetara m na-ekwu okwu a otutu nwanne m nwaanyị banyere Ihọd m bụ na ịhụnanya na-. Agwaghị m ya ma ọ maara. O kwetara o mere afọ mgbe n'ihi na apụghị m mechie-elu banyere otú magburu onwe ya bụ, otú na-akpa ọchị na ọ bụ, otú ụdị ọ bụ, otú ọ ga-agụnye m, na ihere na-eme otu, na mkparịta ụka.
Kemgbe ihe karịrị obi ụtọ site Ha na-egosi gị Ntị
Ee, i nwere ike inwe nnọọ obi ụtọ site onye ị fancy egosi ụdị ọ bụla nke uche ma mgbe ị hụrụ n'anya na onye ọ bụ ihe karịrị na. Ọ na-adị a bit dị ka a njikọ. Ndụ ha na ha na-ekwu ka ị na-! Kedu ada a bit mwute ma ọ bụ eke mgbe ị hụrụ mmadụ n'anya n'ihi na ị na-ahụ ha dị ka ndị zuru ebe ị na-adịghị ahụ onwe gị dị ka ndị zuru. Ma mgbe ha na-ekwu banyere aha gị ọ na-ada ka a abụ olu ụtọ. Dị ka ọtụtụ ihe dị ebube na ị na mgbe nụrụ. Ma mgbe m na-ekwu njikọ ọ pụrụ ịbụ na o kwere omume a ihunanya njikọ ma ọ bụrụ na ọ bụ unrequited, ọ pụrụ ịbụ a enyi njikọ. Ihe bụ ma ọ bụrụ na ha na-adịghị gị n'anya azụ ma na ị hụrụ ha n'anya na ị ka na-achọ ka ha na ndụ gị na ụfọdụ ikike ma ọ bụ na-emeghe na-arụrịta ụka ma na ga-healthiest ọnọdụ na ụwa ma ọ bụ maa otú mmetụta uche mmadụ na play ọrụ.
E a miri emi agụụ na-ha na ha nọ na mgbe ị na-eche na i nwere ike mgbe ahụ ha ọzọ e nwere na nke a efu mmetụta n'ime. Ọ bụ torturous n'ezie. Mgbe ahụ ma ọ bụrụ na i nwere ihe ole na ole ọṅụṅụ, ọ na-akawanye njọ. Ị na-amalite na-eti. Ma eleghị anya ị ga-eche dị ka na ihe karịrị a anwụrụ. Ọ bụ ihe efu mmetụta nke enweghị ha na ndụ gị, na-enwe mmetụta dị ka ndụ gị na mgbe aga na-ezu na-enweghị ha. Dị ka ọ bụ a ọkara ndụ. Ihe niile ị na nweta ga-enweghị ihe. Ma ị ga-esi site na. Ọ bụ a ogologo ụzọ ma ị pụta n'akụkụ nke ọzọ.
Ime Sense nke dịwara na Mmekọrịta